Madaxweyne Erdogan oo Booqasho ku jooga Dalka Kuwait – Radio Muqdisho
Madaxwaynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho rassmiya ku tagay wadanka kuwayd kadib martiqaad uu ka helay amiirka wadanka kuwayd
Shiekh Sabah Al – Ahmad Al – Jaber Al – Sabah. Recep Tayyip Erdogan markii uu soo gaadhey airportka waxaa halkaa ku qaabiley raisal wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arimaha dibada wadanka kuwayd Shiekh Sabah Al – Khalid Al – Hamad Mr Erdogan ayaa ka soo laabtay booqasho uu ku joogay magaalada Sochi ee wadanka Ruushka, halkaasoo kulan kulan kula qaatey dhigiisa wadanka ruushka Vladimir Putin.
Madaxwayne erdogan ayaa sheegay intu ku gudo jiro safarkan inuu kala hadlo dawlada kuwayd xiisada ka dhex aloosan dawladaha khaliifka waxaanu ugu baaqay madaxda gobolka inay ka sheqeeyaan sidii la iskugu soo dhawayn lahaa dadka walaalaha loogana shaqayn lahaa isku duubnaanta iyo midnimada khaliijka.
Intaa wuxuu ku daray dhamaan dawladaha khaliifku inay walaal isku mida u yihiin wadanka turkiga wax lagu xumaadana ay tahay in la kala fogeeyo lana kala jarjaro dad walaalo ah isagoo sheegey siyaasadaa cidda wadana in la garanyo.
Afhayeenka madaxtooyada turkiga Ibrahim Kalan ayaa sheegay madaxwayne Erdogan intuu ku suganyey wadanka turkiga inuu dawlada kuwayd ka wada hadli doonaan arimaha xidhiidhka labada wadan sidii loo xoojin lahaa sdioo kale ganacsiga ,maalgashiga ,dalxiiska warshada ,militariga iyo waxbarashada afhayeenku intaa wuxuu ku daray Mr Erdogan marka uu dhamaysto doorashadiisa wadanka kuwayd inuu uga sii gudbi doono wadanka Qatar halkaasuu kaga qayb gali doono shirka Guddiga Istaraatiijiga Turkiga-Qatari.
Ciidamada Xoogga Dalka oo la wareegay deegaano hoos yimaada Baraawe
Head of Procurment